ဘယ်လိုအကြားအမြင်ရ Reader ကိုဖြစ်လာမှ - ထို Beginner များအတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းများ။ - အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ်
အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် > ဗီဒီယိုများ > ဘယ်လိုအကြားအမြင်ရ Reader ကိုဖြစ်လာမှ - ထို Beginner များအတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းများ။
Megan မေလ 26, 2017 ဗီဒီယိုများTagged clairvoyance, တစ်အဘိဥာဏ်စာဖတ်သူဖြစ်လာဖို့ဘယ်လောက်, အဘိဥာဏ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူခြင်း, PSY ..., အဘိဥာဏ်, အဘိဥာဏ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ, အဘိဥာဏ်စာဖတ်သူကို, အဘိဥာဏ်စာဖတ်ခြင်း, အကြားအမြင်, စာဖတ်ခြင်း, ဖတ်a Comment ချန်ထား အဆိုပါ Beginner များအတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းများ - တစ်ဦးအကြားအမြင်ရ Reader ကိုဖြစ်လာဖို့ဘယ်လိုပေါ်မှာ။
http://psychics.co.uk Craig talks about how to becomeapsychic reader. You think you’re psychic and get the occasional spontaneous clairvoyance of precognition of the future but now wonder how to develop your latent psychic skills and wonder how to becomeapsychic reader in the future. This video explains the simple first steps you can take to becomingapsychic. Here Craig explains in beginner’s language the step by step methods to get started on your psychic quest.
တစ်ဦးအကြားအမြင်ရ Reader ကိုဖြစ်လာဖို့ဘယ်လို:
ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ Craig သင်သည်သင်၏သတိလစ်စိတ်ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သင့်ဝှက်ထားအဘိဥာဏ်အစွမ်းအမှရယူပေးမယ့်နည်းလမ်းအဖြစ် Rorschach မှင်ချေကိုသုံးနိုင်သည်သင်မည်သို့ပြောပြသည်။ သူကသင့်ရဲ့ပင်ကိုယ်မှတဆင့်ကြွလာသော clairvoyance မှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမှဖွဲ့စည်းသောရုပ်တုဆင်းတုသို့ကြည့်ရှုနိုငျပုံကိုပြသသည်။ Tarot Card များကိုနှင့်အခြားကတ်များကိုရိုးရှင်းစွာသင်သည်သင်၏သတိလစ်စွမ်းရည်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိကူညီရန်နှင့်သင့်ငုပ်လျှိုးနေအဘိဥာဏ်စွမ်းရည်ကိုဖွင့်ရန် tool ကိုဖြစ်ကြသည်။ ဒီနည်းလမ်းကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုရိုးရိုးကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတဲ့ professional အဘိဥာဏ်စာဖတ်သူဖြစ်လာဖို့သင့်ရဲ့သွားရာလမ်းပေါ်တွင်သင်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုအဘိဥာဏ်ထိုးထွင်းသိမြင်သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်သင်၏မျက်စိရှေ့တွင်၌တည်ရှိ၏တစ်ခုခုကိုသုံးနိုင်သည်။
အပိုအာရုံခံသဘောထားအမြင် - တစ်အဘိဥာဏ်စာဖတ်သူကိုဖြစ်လာမှလမ်းကြောင်းကိုသငျသညျအထဲကစကားမပြောတတ်နှင့် ESP မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏အတွင်းစိတ်ကမ္ဘာမှသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးမက်ဆေ့ခ်ျကိုပေးစေခြင်းငှါကူညီပေးပါမည်ဤရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများနှင့်အတူစတင်နိုင်ရန်ရှိပါတယ်။ သငျသညျအစပိုင်းတွင်အလိုလိုသိနှင့် telepathic သတင်းအချက်အလက်ကောက်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်အပြည့်အဝ clairvoyance နှင့်အနာဂတ်ရူပါရုံကိုရဖို့ရန်ပေါ်ရွှေ့ဖို့ဒီ technique ကိုသုံးနိုင်ပါသည်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာဒီရိုးရှင်းတဲ့ပေမယ့်လေးနက်တဲ့နည်းစနစ်ကိုသင်စတင်ရန်ပါလိမ့်မယ်သင့်ရဲ့အဘိဥာဏ်ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်ပျော်မွေ့နေတဲ့အလယ်အလတ်ဖြစ်လာဖို့ရှာကြသည်ရှိမရှိ။
အခမဲ့ Skype session တွင်ပါဝင်ရန်:
Craig & Jane'S CHARIATABLE Foundation ကိုထောကျပံ့